यी नायकले मोटोपना घटाउनका लागि गराए शल्यक्रिया, सात दिनपछि मृत्यु | Ratopati
यी नायकले मोटोपना घटाउनका लागि गराए शल्यक्रिया, सात दिनपछि मृत्यु
personएजेन्सी exploreभारत access_timeअसार ८, २०७४ chat_bubble_outline1
विवेक शौक हुन त बलिउडमा सपोर्टिङ रोल गर्दथे । तर उनलाई ‘फ्लप शो’ जस्ता टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि चिनिन्छ । सन् १९६३ जून २१ तारिखमा जन्मेका विवेकको ४७ वर्षमा मृत्यु भएको छ । तर त्योभन्दा अघि उनी सात दिनसम्म कोमामा रहेका थिए ।
सन् २०११ मा जनवरी ३ तारिखमा विवेक तौल घटाउने शल्यक्रिया (लिपोसक्शन सर्जरी) गराउन ठाणेको कारखानीस नर्सिङ होम पुगेका थिए । प्लाष्टिक सर्जन डा. समिर कारखानीसले उनको शल्यक्रिया गराएका थिए ।
शल्यक्रियाको दुई घण्टा पछि विवेकको स्थिती बिग्रिएको थियो । तीन हृदरघातपछि विवेकलाई जुपिटर पुर्याइयो । यहाँसम्मकी कार्डियोलोजिस्ट डा. दयानन्द कुम्बलाले विवेकको हत्यापछि भनेका थिए, ‘उनको मुटुले काम गर्न बन्द गरेको थियो । उनलाई तीन इमर्जेन्सी शाक पनि दिइएको थियो । उनी लाइफ सपोर्ट सिस्टममा थिए तर कोमामा गए ।
सात दिन पछि अर्थात् १० जनवरी सन् २०११ मा उनको मृत्यु भएको थियो ।
विवेकले डा.सँग लुकाएका थिए मेडिकल हिस्ट्रिः
लिपोसक्शन सर्जरीका लागि व्यक्ति निकै फिट हुन जरुरी छ । तर डा. समिर कारखानीसका अनुसार विवेकले उनीसँग आफ्नो मेडिकल हिस्ट्री लुकाएका थिए र जब शल्यक्रियाभन्दा पहिले उनको इसीजी र टुडी इको गरियो त्यो पनि साधारण आयो । त्यसकारण उनलाई शल्यक्रिया गर्दा कुनै समस्या नदेखिने डाक्टरहरुले निष्कर्ष निकाले ।
तर सन् २००३ मा विवेकलाई ठूलो हृदयघात भइसकेको थियो । जुपिटर हस्पिटलका एक अन्य कार्डियोलोजिस्ट डा. विजय शाहले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘शौकको मेडिकल हिष्ट्रिमार्फत हामीलाई थाहा भयो कि उनलाई सन् २००३ मा तीन स्टन्ट्स उनको छातीमा लगाइएको थियो । उनी रगत पातलो बनाउने औषधी पनि खाइरहेका थिए । तर लिपोसक्शन सर्जरीभन्दा पहिले उनले यसलाई बन्द गरिदिएका थिए ।
तीन सन्तानका पिता थिए विवेकः
विवेक तीन सन्तानका पिता थिए । उनको परिवारबारे धेरै जानकारी उपलब्ध छैन । तर सन् २०११ मा उनको मृत्युपछि नायक आर्य बब्बरले भनेका थिए, ‘उनका जुम्ल्याहा छोरीहरु टिनएजमा पुगिसकेका छन् भने छोरा निकै सानो छन् ।’
Nov. 20, 2017, 7:11 p.m. suvash
He died in January 2011, I don't see what is the point of bringing this old issue up. The least this article could have done is to talk about effects and mitigation measures of obesity and the importance of talking about medical history with your doctors. There are so many pertinent issues, which need immediate attention rather than talking about an actor in bollywood who died6years ago.